Izay ananako rehetra no entiko hiderako Anao - Le blog de midera
Izay ananako rehetra no entiko hiderako Anao
Publié le 4 mai 2008 par midera
Andriamanitro, Mpamonjiko, Raiko, Mpanjakako.....
Mitsaoka, miankohoka, mankasitraka tanteraka Anao aho amin'ny fahalebiazanao eo amin'ny fiainako.Tsara loatra hianao Andriamanitro, ambony loatra hianao, ny zava-boahary rehetra miankohoka eo anatrehanao satria feno sy tanteraka hianao.
Mameno ny foko izany fahalebiazanao izany, inona moa izay izaho no mendrika ny fitiavanao? inona ny fahotana tsy vitako? taiza ny ati-lavaka mangitsokitsoka nisy ahy? impiry aho no nandà sy nihodina taminao? impiry aho no ninia nanohitra ny didinao?
Nefa dia mbola teo foana hianao niandry Ahy, nanatsotra ny tanam-pitiavanao....
Jesosy malala, misaotra! misaotra ny amin'ny faharetanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao tsy takatry ny saiko.
Izao aho dia te hikiaka hiantso mafy eran-tany eran-danitra izany fahalebiazanao izany , te hiantso mafy ny anaranao , tiako ho ren'ny miaina rehetra ny fitiavanao sy ny fahambonianao , tsy noho izay voaraiko sy nataonao tamiko ihany fa noho ny maha hianao ANAO.
NY ampitso sy ny ho aviko rehetra Jesosy dia efa eo am-pelan-tananao, tsy hisafidy intsony aho fa efa Hianao no safidiko , Hianao no hanapaka tanteraka ny fiainako, ny tokan-tranoko, ny zanako sy izay tokony ataoko rehetra, satria efa manana ny soritra nosoritanao ho ahy Hianao.
Ny foko manontolo sy izay ananako rehetra no entiko hitiavako Anao!
Faly aho fa zanaka Mpanjaka , faly aho eo antratranao, sambatra aho manana Ray Anao , Tsy andriko ny fotoana hiaonako aminao.....
Zanaka tsy foinao sy tsy mahafoy anao.AMEN
Publié dans louanges et adorations
Joie dans le monde , Jésus est né!
« Afin que le ciel puisse... ho eo am-bavako mandrakariva... »